Tijaabooyinka Guryaha ee Ugu Fiican - Ikkaro
Tijaabooyinka guryaha lagu sameeyo ayaa ah farshaxanka isku dhafka qaybaha aad si fudud u heli karto gurigaaga ama supermarket adigoon aadin dukaamada khaaska ah si aad u tagto hubi ama muujiya ifafaale cilmiyaysan.
Haddii tani ay tahay baloog guud, tijaabooyinka guriga ayaa koobi lahaa DIY, samee naftaada iyo ikhtiraac nooc kasta ah, sharaxaada farsamooyinka ay ka mid yihiin elektaroniga. Laakiin meel diiradda la saaray sidii Ikkaro, halkee wax walbaa waa DIY, saynis iyo farsamo guriga lagu sameeyo waxaan aaminsanahay in wax walboo ay ahaadaan meeshiisa.
Anagoo adeegsaneyna qeexitaanka "Tijaabada", waxaan u kala saari doonaa tijaabo guri mid kasta oo aan dooneyno inaan ku ogaanno, ku xaqiijino ama ku muujino ifafaale cilmiyaysan ama mabaadi'da cilmiga sayniska iyo cilmiga dabiiciga ah.
Waxaan ku kala saareynaa Tijaabooyinka carruurta. HA KU WAAYN
Tijaabooyinka lagu kala saaray
Gantaalada guryaha lagu sameeyo
La cusbooneysiiyay 05/10/2018 -> Waxaan bilownay inaan dib u qorno oo xirno kaararka tijaabada cusub ee tilmaamaya qodobo kala duwan: Qalabka, Qiimaha, Waqtiga dhameystirka, Da'da lagu tilmaamayo (kiiskan dhakhtarka cilmu-nafsiga caruurta wuxuu naga caawinayaa kiiska tijaabooyinka carruurta) iyo waxa aan baran karno, sharxi karno ama aan sii dheerayn karno
Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay mashruuca cusub!
Este tijaabo waa si fudud. In kasta oo waxa dhab ahaan la sameeyay aysan ahayn caag, laakiin waa kiiska, borotiinka caanaha, laakiin natiijada tijaabada waxay umuuqataa caag ;) Waxaa jira kuwa ugu yeeraya Bioplastic.
Xamaasad ahaan, ka faallo in walaxdan loo sharciyeeyay 1898 iyo sannado ka dib Coco Chanel Waxaan isticmaali lahaa «dhagax caano»Ama Galalith tooda Jawharado khiyaali ah.
Magacyada kale ee loo bixiyo Galalith waa: Galalite, dhagaxa caanaha, dhagaxa caanaha.
Sida looga sameeyo laambad saliid liin dhanaan
Tani waa wax saaxiibkay baray waqti hore, oo kaliya liinta iyo saliid yar ... Akhri akhriska
Gantaal lagu buufiyo guriga
Mid ka mid ah gantaallo ka fudud oo wax ku ool ah ayaan arkay, in yarna waan arkay ;-) Waxay ku shaqeysaa iyadoo la gubayo nooc ka mid ah aerosol, waxyaabaha udgoon ama buufin la mid ah, kolba inta dabku holcayo ayaa ka sii wanaagsan.
Waxaan ku soo daray liistadayda waxa aan samaynayo. Laakiin inta aan go'aansado inaan sameeyo waxaan kaaga tegayaa fiidiyaha. Aad u fudud. Iyo sida ugu dhakhsaha badan ee aan yeelno, waxaan ku xirnaa hagaajinta aan sameyno ;-)
Muraayad aan dhammaad lahayn
Maanta waxaan u imid inaan ku baro sida loo sameeyo muraayad leh Laydhka oo abuura tunnel aan dhammaad lahayn. Waa saameyn indho qabow oo aan rabo inaan kula wadaago.
Mashruucu wuxuu igu qaatay muddo bil ku dhow si aan u helo dhammaan qalabka. Waxaan sameeyay fiidiyow yar oo ku saabsan sida ay wax noqdeen iyo waxaan horay uga cudurdaaranayaa tayadiisa.
Sida loo sameeyo doqon macmal ah
Hadaad daawato showga Hormiguerohubi inaad waligaa aragtay Doqonka. Aaladdaas (samaacadaha) taas sababi turunbo maqalka codkaaga adiga oo dib udhacaya dhawr milliseconds intaad hadlaysid
Jidka doqon macmal ah samee Waa wax aad u fudud, waa inaanu soo dejino oo keliya DAF (Jawaab celinta Auditory Dib loo dhigay) oo taas si sax ah u samayn doonta, ku soo celi ereyadeenna dib u dhaca ku yimid milisocond-yada aan u sheegno.
Dhoofiye, Doqonka ciyaarta guddiga
Waxaa jira ciyaar Hasbro on Qaloocin taas oo si sax ah u sameysa tan oo ah muuqaal ahaan rafcaan u leh ciyaaraha qoyska marka loo eego kaliya soo dejinta barnaamijka. Waxaan kuu daayay isku xirka iibka
DAF ee Windows
DAF / FAF Kaaliyaha Windows
Dib u dhigida Jawaab celinta Dhageysiga - Stuttering -DAF on Windows Pc
Sida loo sameeyo batariga biyaha cusbada lagu sameeyo ee guriga lagu sameeyo
José Manuel Cano ayaa nooga tagay boggayaga Facebook-ga, fiidiyaha baytariga guryaha lagu sameeyo oo lagu sameeyay ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo mashiin rotomoulding oo guriga lagu sameeyo
Waxaan raadinayay sida loo sameeyo a mashiinka cirbada guryaha lagu sameeyo. Waxaan hayaa fikrado, fudud maxaa yeelay waxaan u baahanahay wax aad u aasaasi ah, laakiin waxaan doonayay inaan arko waxa ku jira internetka.
Oo anigoo raadinaya mashiinka irbadda ayaan helay mid mashiinka roomka gurigaSidoo kale aad u xiiso badan :)
Sida loo sameeyo jel qabow kulul
Isboorti ma qabataa? Ha sameyn Hagaag, waan hubaa inaad taqaanid qof sameeya oo yimaada nabarro, culeysyo fara badan, iwm oo ay dhahaan isboorti waa wanaagsan tahay ;-)
Maalin dhaweyd kadib tababar dheer, waxaan guriga la imid anigoo jilib xun iyo waxa caadiga ah, si aan baraf isu dul dhigo. Guriga waan lahaa boorso 3M jel kulul iyo qabow leh Laakiin maxaad u iibsaneysaa mid markii aad sameyn karto?
Waxaa jira xalal dhaqameed guri oo adeegsada bacaha barafoobay ee digir ama bariis si loo mariyo qabow. In kasta oo ay u adeegto sidii ku-meel-gaadh ku-meel-gaadh ah, haddana waxay leeyihiin khasaarooyin aan dib loo isticmaali karin oo ay noogu adeegi waayaan kuleylka.
Sida loo sameeyo xirmooyinka jel kuleylka qabow
Bogga1 Bogga2 ... Bogga9 Xiga →